Loyola မှ Saint Ignatius သို့ဆုတောင်းခြင်း။ ? လူများနှင့်ရန်သူများကိုမောင်းထုတ်ရန်
Loyola ၏စိန့် Ignatius ထံဆုတောင်းပါ သူသည်ဤကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ရှိစဉ်ကတည်းကသူသည်အခြားသူများကိုယုံကြည်ရန်နှင့်အမြဲကူညီရန်မှာအဓိကဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်သူသည်ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်ကိုထက်သန်စွာယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးခရစ်ယာန်အယူဝါဒကိုကျင့်သုံးခြင်း မှလွဲ၍ ကြီးစွာသောအရာများကိုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ သခင်ဘုရား၏အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ရန်နောက်ဆုံးအသက်မွေးသည့်အချိန်အထိသူ့ကိုအမြဲတမ်းကူညီပေးနိုင်သည့်ထိုအစွမ်းထက်သောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဖန်တီးမှုရှိသောဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်ကျွန်တစ် ဦး သည်အခြေအနေဆိုးများမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့၏မဟာမိတ်ဖြစ်လာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှပင်လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ၊ San Ignacio de Loyola သည်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားကူညီရန်သူ့လက်၌အမှန်ပင်ရှိသည်။
1 Loyola ၏စိန့် Ignatius ၏ဆုတောင်းချက်ဘယ်သူလဲ။
1.1 လူများနှင့်ကင်းကွာစေရန် Loyola ရှိ Saint Ignatius ၏ဆုတောင်းချက်
1.2 Loyola ၏ Saint Ignatius ထံရန်သူများထံမှဆုတောင်းပဌနာ
Loyola ၏စိန့် Ignatius ၏ဆုတောင်းချက်ဘယ်သူလဲ။
Ignacio de Loyola ကို ၁၄၉၁ တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်ဟုသမိုင်းကဖော်ပြသည်။ သူသည်သူ့မိသားစု၏ဓလေ့ထုံးစံအရစစ်မှုထမ်းရန်အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်ဒဏ်ရာခံစားခဲ့ရပြီးစစ်သင်တန်းတက်ခြင်းကိုတားဆီးခဲ့ပြီးဤနည်းအားဖြင့်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်သစ္စာရှိသူတစ် ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။
လုပ်နေတာစတင်ခဲ့တယ် အချို့ဝိညာဉ်ရေးရာဆုတ်ခွာနေ သူသည်လေ့ကျင့်ခန်းတွင်ထပ်မံလေ့ကျင့်ခန်းများထပ်မံထည့်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကသူသည်လေ့ကျင့်ရေးပုံစံတစ်ခုတည်းကိုလိုက်နာခဲ့ကြသောအခြားသူများကသူ့ကိုစတင်ဝေဖန်မှုများစတင်ခဲ့သည်။ သူဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်များစွာသောဖြစ်စဉ်များပြီးနောက်သူနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည် Jesus Company သောတက်တစ်ခုသက်ရှိဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့အရာအားလုံးမှာအလုပ်လုပ်တယ် el Mundo.
သူသေသွားတယ် ရိုးမား ၁၅၅၆ ခုနှစ်တွင်သူသည် ၁၆၀၉ ခုနှစ်တွင်အရက်သောက်ခြင်းခံရပြီး ၁၉၂၂ တွင်အမြတ်ထုတ်ခံခဲ့ရသည်။ သူမွေးဖွားခြင်းကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်ဇူလိုင် ၃၁ ရက်တွင်ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပြီးကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်အမှတ်ရခြင်းခံခဲ့ရသည်။
လူများနှင့်ကင်းကွာစေရန် Loyola ရှိ Saint Ignatius ၏ဆုတောင်းချက်
သင်၏မိခင်အလင်းအား Loyola ရှိ Saint Ignatius မှုတ်သွင်း။ ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်လုပ်ငန်းတော်၏လမ်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ရန်၊ သူ၏ဘ ၀ ကိုသူ၏ ၀ ိညာဉ်ရေးရာနှင့်လူသားဘ ၀ အားလူသားအဖြစ်သို့ထမ်းဆောင်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသောချီးမြှောက်ခံရသောကောင်းကင်မိခင်၊ ကျွန်ုပ်၏အမှားများကိုခွင့်လွှတ်ပြီးခွင့်ပြုပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားဝန်ခံခြင်းအားဖြင့် Loyola မှစိန့် Ignatius ကကျွန်ုပ်ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ အင်အား ငါ့ကိုထိခိုက်စေချင်တဲ့လူတွေကိုငါ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ရင်ငါသူတို့ကိုငါဘေးဖယ်ပြီးသူတို့ကိုကောင်းမှုလုပ်ဖို့ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာသိစေချင်တယ်။ အာမင်။
သငျသညျကလူကိုရွှေ့ချင်လျှင်ဤအရာသည် Loyola Saint Saint Ignatius ၏ဆုတောင်းချက်ဖြစ်သည်။
San Ignacio de Loyola ကိုယုံကြည်မှုကြောင့်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုများစွာကိုကျော်ဖြတ်ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
သငျသညျယုံကွညျဖို့သာလိုပါသညျ၊ သူသညျကောငျးကငျဖခငျမတိုင်မီကြှနျုပျတို့ကိုထောကျပံ့ပေးနိုငျသောအစှမျးသတ်တိရှိသညျ၊ သို့ဖွစျ။ အခွအေနမြေားသို့မဟုတျလူသညျကြှနျုပျတို့၏ဘဝအသကျတာမှလုံးလုံးသှားမညျ။
Loyola ၏ Saint Ignatius ထံရန်သူများထံမှဆုတောင်းပဌနာ
ယေရှု၏အသင်းကိုတည်ထောင်သူ Loyola မှ Saint Holy Ignatius; ဘုရားသခင့်ဘုန်းတော်ကိုကမ္ဘာအနှံ့အပြားသို့ဖြန့်ဝေရန်ထောင်နှင့်ချီသောလူတို့တွင်ရွေးချယ်ခဲ့သည် သီလအမျိုးမျိုးတွင်အထင်ရှားဆုံးလူ ...
သို့သော်အထူးသဖြင့်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုသင်အမြဲတစေတောင့်တခဲ့သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သန့်ရှင်းခြင်း၌၎င်း၊ ထင်ရှားသော penance, နှိမ့်ချခြင်းနှင့်သမ္မာသတိ၏သူရဲကောင်း; စဉ်ဆက်မပြတ်၊ ဘုရားသခင်အားချစ်ခင်မြတ်နိုးမှု၊ သက်ဝင်ယုံကြည်မှုနှင့်အခိုင်မာဆုံးမျှော်လင့်ချက်ရှိခြင်း
သင့်ကိုဤမျှလောက်များစွာသောထင်ပေါ်ကျော်ကြားသောဂုဏ်သတ္တိများဖြင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံလာသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းမြောက်မိပါသည်။ ကျွန်ုပ်အားသင့်အားအားပေးသည့်စိတ်ဓာတ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ထိုကဲ့သို့သောဖြောင့်မတ်သောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သင်၏သားသမီးအားလုံးထံရောက်ရှိရန်တောင်းပန်ပါ၏။ မင်းတုပပြီးဒီနည်းအားဖြင့်ငါဟာမင်းရဲ့ကုမ္ပဏီမှာဂုဏ်အသရေရှိဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။
Loyola Saint Saint Ignatius ၏ဆုတောင်းခြင်းသည်ယုံကြည်ခြင်းများစွာဖြင့်ရန်သူများကိုဆုတောင်းပါ။
ရန်သူများသည်ဖန်ဆင်းခြင်းအစမှတည်ရှိခဲ့ကြပြီး San Ignacio de Loyola တွင်သူတို့၌ရှိခဲ့ပြီးသူဖြတ်သန်းသွားသောအခြေအနေအားလုံးမှအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်သူ့ကိုအထူးသဖြင့်ဝါကျတစ်ခုမှာငါမေးတာပါ ရန်သူများကိုဆန့်ကျင် Loyola မှ Saint Ignatius သည်လူသားများအားကျော်လွှားရန်ခက်ခဲသောအခြေအနေများစွာကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီနိုင်သည်။
ဆုတောင်းချက်များ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအစွမ်းသည်တန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံပြီးရည်ရွယ်ချက်ကောင်းသည်နှင့်ဆုတောင်းခြင်းသည်လိုအပ်သော ၀ ိညာဉ်ထံမှငိုကြွေးသကဲ့သို့ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ယူဆောင်လာနိုင်သောအရာမရှိပါ။
Loyola မှဘုန်းတော်ကြီး Saint Ignatius သည်ယေရှု၏အသင်းကိုတည်ထောင်သူ၊ ကျွန်ုပ်၏အထူးရှေ့နေနှင့်ကာကွယ်သူဖြစ်သည်။
သင်၏ဘုန်းအသရေနှင့်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေရန်၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ၏ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သန့်ရှင်းသောယုံကြည်ခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်း၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသင်၏သားသမီးများမှတစ်ဆင့်တိုးချဲ့ခြင်းတို့ကြောင့်သင်ကောင်းကင်၌အလွန်မြင့်မားသောကြောင့် ...
ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များကိုအကြွင်းမဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးရန်နှင့်ကိုယ်တော့်အားဝတ်ပြုရန်အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်း၊ သီလလမ်းစဉ်၌မြဲမြံစွာတည်ကြည်ခြင်းတို့အတွက်ကျွန်ုပ်အားဘုရားသခင့်သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်ခြင်းဆီသို့ရောက်ရှိစေပါ။ သူ၏ခင်မင်ရင်းနှီးမှုနှင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သေဆုံးခြင်း၊ ကိုယ်တော်ကိုတွေ့မြင်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာသင့်အပေါင်းအသင်းတွင်ဂုဏ်တင်ခြင်းတို့ကြောင့်သေဆုံးခြင်း၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
San Ignacio de Loyola ရဲ့အကာအကွယ်ပေးရေးဆုတောင်းချက်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား။
ကိုယ်တော့်ထံကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းနိုင်သည် ခက်ခဲသောအချိန်များတွင်ကာကွယ်မှုတောင်းခံပါ ငါတို့အဘို့သို့မဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်ငါတို့မိသားစုများအတွက်ဖြစ်စေ။
သင်နှင့်သင်၏သစ္စာရှိဂျူးခရစ်ယာန်တပည့်များမှထွက်သွားကြသောအခါကက်သလစ်ဘာသာ၏သစ္စာရှိသောသူတော်စင် Loyola မှစိန့်အဂနိတီးယပ်သည်မှားယွင်းသောအပြောအဆို၊ အယူဖောက်ပြန်သူများနှင့်အရေခြုံမှားယွင်းမှုများမှသူမကိုကာကွယ်ပေးခဲ့သည်။ မကောင်းမှုကိုရှောင်ရှားရန်၊ မကောင်းသောအိမ်နီးချင်းများကိုမောင်းထုတ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်၏ရန်သူများကိုလမ်းပေါ်မှဖယ်ရှားရန်၊ စိန့် Ignatius of Loyola ယေရှုခရစ်၏သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သူအားသင်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့် ငါကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း။ အာမင်
မကောင်းတဲ့အိမ်နီးချင်းတွေကိုမောင်းထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်Loyola ၏ Saint Ignatius ထံဆုတောင်းရန်သင်ဆုတောင်းရမည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းနဲ့နီးစပ်သူတစ်ယောက်ရှိရင်ဘယ်တုန်းကမှမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကအိမ်နီးချင်းဆိုးများဖြစ်တဲ့အခါအရာရာတိုင်းဟာရှုပ်ထွေးလာတယ်။ သူတို့ကငါတို့ရန်သူဖြစ်လာပြီးငါတို့ဘ ၀ ကိုမဖြစ်နိုင်အောင်အမြဲတမ်းလုပ်နေတဲ့လူတွေပေါ့။
စန်း Ignacio က de Loyola ဒီမကောင်းတဲ့အိမ်နီးချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုနှိမ်နင်းနိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်မလား ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသူတို့၏ငြိမ်းချမ်းမှုကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
လူများနှင့်ရန်သူများကိုကာကွယ်ရန် St. Ignatius ၏ Loyola ဆုတောင်းချက်၏စွမ်းအားကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းယုံကြည်ရမည်။